Rafitra fitantanana ny hopitaly vahaolana hopitaly
Fotoana fandefasana: Dec-14-2020
Amin'izao fotoana izao, fivarotam-panafody sy paroasy amin'ny hopitaly maro no tsy miraharaha firy ny fitantanana fanafody. Ireo fanafody dia tsy sokajiana sy tazonina izay tsy mahita ilay tompon'andraikitra amin'izany; ny tompon'andraikitra tompon'andraikitra lehibe ao amin'ny faritra fitahirizana fanafody dia manokatra varavarana araka ny finiavany hahazo ny fanafody ...Hamaky bebe kokoa »
Tranga fampiharana mahazatra an'ny Kabinetra fitantanana manan-tsaina manan-tsaina
Tranga fampiharana mahazatra an'ny Kabinetra fitantanana manan-tsaina manan-tsaina——Jin Bei Group Co., Ltd. Ao amin'ny Kambodza General Information Company anarana: Jinbei Group Co., Ltd. Adiresy: Faritanin'i Sihanouk, ...Hamaky bebe kokoa »
Vahaolana fiara - indostrian'ny fanabeazana
Mihamaro ny oniversite sy andrim-panabeazana mila manome serivisy azo ovaina sy mahomby amin'ny mpiasa sy ny mpianatra. Ny oniversite sy ny andrim-pampianarana Fikambanana fikarakarana ara-pahasalamana amin'ny andrim-pampianarana dia iharan'ny tsindry tsy tapaka rehefa ...Hamaky bebe kokoa »
Vahaolana hotely avo lenta
Ny valanaretina korona tamin'ity taona ity dia nitondra fiatraikany lehibe teo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fampirantiana eran-tany, indrindra ny indostrian'ny hotely. Ny mpitantana hotely dia miatrika olana ara-piarovana, ny fomba hanatsarana ny fahombiazan'ny trano fandraisam-bahiny ary hametraka komisiona amin'ny t ...Hamaky bebe kokoa »
Vahaolana amin'ny birao ho an'ny orinasa kely sy salantsalany
Orinasa na orinasa mazàna dia manana departemanta orinasa maro, toy ny Sampan-draharahan'ny Fitantanana, Sampan-draharaha ara-bola, Sampan-draharaha misahana ny asa sy fikojakojana, ny lozisialy Logistics Fleet ary ny sampana fiarovana. Betsaka ihany koa ny efitrano fiasan'ny birao toa ny Office, efitrano fivoriana, Recep ...Hamaky bebe kokoa »
Kabinetra lakile azo mihidy, Rafitra fitantanana boaty kely sy lakile, Vata fanalahidy mihantona, Kabinetra fitehirizana lehibe, Ny boaty ho an'ny fanalahidy fanaraha-maso, Kabinetra fitantanana lehibe,